လိင် - ဖော်ထုတ်ထားသည့်လိင်ဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုများကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်စေ၊ အတူတကွကြည့်ရှုခြင်း - ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်မှုများ (၂၀၀၉) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်
တစ်ယောက်တည်းသို့မဟုတ်အတူတကွလိင်-အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများကြည့်ရှုခြင်း: ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး (2009) နဲ့အသင်း
comments: ဒီလေ့လာမှုကမကြာခဏ porn ကိုကြည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်သောရန်တွေ့ခြင်းအဘို့အထောကျပံ့အဖြစ်ကိုးကားထားသည်။ လေ့လာမှုမှ:
သာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုအားပေးသူများသည်ပိုပြီးအပျနှံများနှင့်တစ်ဦးတည်း SEM ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုထက်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။
သို့သော်စုံတွဲများ၏ရာခိုင်နှုန်း, ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနမူနာအတွက်, နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်တစ်ခုတည်းသောအတူတကွ porn watch ရှိရာအလွန်သေးငယ်သည်။ ကျနော်တို့ဎနေချိန်မှာဒီအဖြစ်အများအပြားလေ့လာမှုများ, အထီး porn အသုံးပြုမှုအလွန်မြင့်မားမှုနှုန်းသတင်းပို့ကိုသိရအကြီးဆုံးအမေရိကန်စစ်တမ်း (အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း) မှ ationally ကိုယ်စားလှယ် data တွေကိုအမျိုးသမီးတွေသာ 2.6% သည်လွန်ခဲ့သောလတွင်တစ်ဦး "ညစ်ညမ်း website မှာ" သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ (2002-2004) ။ မြင် ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေး, 2014။ တစ်ခုတည်းသောအတူတကွ porn စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်သူကိုစုံတွဲများ၏ရာခိုင်နှုန်းသိသာသည့် 2.6% ထက်ဝေးလျော့နည်းသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုကိုယ်စားလှယ်တစ်နမူနာ containn ခဲ့ပါဘူး။ ပင်ကိုအနီးကပ်မပေး
SEM ကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှသူကိုတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးတည်း SEM ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုထက်အားလုံးညွှန်းကိန်းအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဆကျဆံရေးအရည်အသွေးကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အကြားတစ်ခုတည်းသောခြားနားချက် SEM ကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှတဲ့သူတွေကို သာ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူကကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုသူတို့အားဘယ်သူကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှခဲ့ ဖောက်ပြန်၏အောက်ပိုင်းနှုန်းထားများရှိခဲ့ပါတယ်။
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2011 ဧပြီ; 40 (2): 441-448 ။
2009 ဒီဇင်ဘာ 29 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1007/s10508-009-9585-4
အမန်ဒါအမ် Maddox, Galena K. Rhoadesနှင့် Howard ဂျေ Markman
ဒီလေ့လာမှုကလိင်-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း (SEM) ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက် 1291 တစ်ကိုယ်ရေတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးကိုကျပန်းနမူနာထဲမှာလည်ပတ်အကြားအသင်းအဖွဲ့များစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အမျိုးသမီးတွေထက်ပိုပြီးယောက်ျား (76.8%) (31.6%) မိမိတို့အပေါ် SEM ကြည့်ရှုအားပေးကြောင်းအစီရင်ခံပေမယ့်ယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဝက်နီးပါးတခါတရံသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက် (44.8%) နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရေး, ကြားဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းမှု, ကတိကဝတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဖောက်ပြန်၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ SEM ကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှသူကိုတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးတည်း SEM ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုထက်အားလုံးညွှန်းကိန်းအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဆကျဆံရေးအရည်အသွေးကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုအားပေးသူများသည်ပိုပြီးအပျနှံများနှင့်တစ်ဦးတည်း SEM ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုထက်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ SEM ကြည့်ရှုအားပေးသာ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူကကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုကကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှသောသူတို့အားဖောက်ပြန်၏အောက်ပိုင်းနှုန်းထားများခဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ဘယ်တော့မှသောသူတို့အားအကြားတစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်။ ဒီဧရိယာထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်လိင်ကုထုံးနှင့်စုံတွဲကုထုံးများအတွက်အနာဂတ်သုတေသနအတွက်သက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
keywords: ညစ်ညမ်း, ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး, စုံတွဲများ, လိင်-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း, အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း
ညစ်ညမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးရှုထောငျ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့ပါပြီ။ ကရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးတို့နဲ့ဆက်စပ်ပုံကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌တယောက်တည်းကရှုမြင်နှင့်ဤအပြုအမူကိုသူတို့ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (ဥပမာသူတို့ရဲ့အမြင်များကိုသာသက်ရောက်ပုံကိုအဘယ်သူသည်ယောက်ျားအပေါ်တစ်ဦးအာရုံရှိခဲ့သည်, Bridges, Bergner, & Hesson-McInnis, 2003; Kenrick, Gutierres, & Goldberg, 2003) ။ အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနအများစုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုမှုနှင့်သဘောထားများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ Lawrence & Herold, 1988; O'Reilly, Knox, & Zusman, 2007) ။ အခြားနိုင်ငံများမှသုတေသနပြုချက်များအရအမျိုးသမီးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများ (SEMs) ကိုသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမဟုတ်ဘဲကြည့်ရှုလေ့ရှိကြသည်။Haavio-Mannila & Kontula, 2003; Træen, Nilsen, & Stigum, 2006) ။ ယခုလေ့လာမှုသည်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ဤရွေ့လျားမှုကိုလေ့လာခဲ့ပြီးလူတစ်ယောက်၏ရင်ခုန်ဖွယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့် SEM ကိုကြည့်ခြင်းသည်ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုလည်းလေ့လာခဲ့သည်။
"မီဒီယာလိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်" အဖြစ်ညစ်ညမ်း (သတ်မှတ်ထားသည်ကာရိုး et al ။ , 2008) ။ သို့သော်များစွာသောသုတေသီများထိုကဲ့သို့သောလိင်အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်း, အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်းနှင့် erotica အဖြစ်အမျိုးအစားခွဲများသို့ညစ်ညမ်းဝေဖန်လော့။ Erotica (ပထမနှစ်ခုအမျိုးအစားထက်အာဏာကို ပို. ဟန်ချက်ပိုမိုအပြုသဘောနှင့်ချစ်ခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံပုံနဲ့သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်စတော့အိတ်, 1997) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုများ၏အာရုံ၏အသစ်အဆန်းပေးထားကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစားခွဲများကိုမသုံးခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစားကျနော်တို့ဗီဒီယိုများ, အင်တာနက်ဝဘ်စာမျက်နှာများ, စာပေ, မဂ္ဂဇင်းများ, ဒါမှမဟုတ်အခြားမီဒီယာ၏ပုံစံသည်ဤအမျိုးအစားခွဲများမဆိုထည့်သွင်းနိုင်သည့်ပိုပြီးယေဘုယျအသုံးအနှုန်း "လိင်-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း" (SEM), ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
SEM ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကြည့်ခြင်း (ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်မပါဘဲ) သည် ၁၈ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းလိင်တက်ကြွသူ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများနည်းပါးပြီး၊ကာရိုး et al ။ , 2008) ။ ထို့အပြင် stack, Wasserman နှင့် Kerns (2004) ဒီထက်ဘာသာရေးဖြစ်ခြင်းအင်တာနက်အပေါ် SEM ကြည့်ရှု၏အားကြီးသောခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ SEM ကြည့်ထဲမှာကျားမကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. ယောက်ျားယေဘုယျအားဖြင့် ( ပို. မကြာခဏအမျိုးသမီးတွေထက် SEM ရှုမြင်Traeen et al ။ , 2006), အသက်အရွယ်နှင့်ဆောင်များတွင်ခြင်းဖြင့်ကျားမကွဲပြားမှုအချို့မူကွဲရှိပါတယ်သော်လည်း။ Boies (2002) အသက်အရွယ်နုပျိုသောလူဦးရေအတွက်3နှင့် 1: အဟောင်းတွေလူဦးရေအတွက်6SEM ကြည့်၏အမျိုးသမီးအချိုးဖို့အထီး 1 ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယောက်ျားလည်းမသက်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းများ (အထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးပရိတ်သတ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိ၏, ပိုမိုအမျိုးသမီးတွေထက် SEM ပျော်မွေ့လေ့Mosher & MacIan, 1994).
မိတ်ဖက်များနှင့်ဆက်ဆံရေးလည်ပတ်မှုအတွက်သဘောထားများအတွက် SEM ကိုကြည့်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များအပေါ်သုတေသနပြုမှုသည်အတော်အတန်ကွဲပြားသည်။ အချို့သောသုတေသနများကအမျိုးသားများနှင့်သူတို့၏မိတ်ဖက်များနှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်အမြင်များ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြသည်။ ဥပမာ, Kenrick et al ။ (2003) လူတို့သညျအခွားသောအမျိုးသမီးများ၏လိင်-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရှုပြီးနောက်လျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက် rated ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ SEM ထိတွေ့ပုံမှန်အဝတ်အချည်းစည်းခန္ဓာကိုယ်တူအဘယ်အရာကို misperceive မှယောက်ျားဦးဆောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်မည်အကြောင်းဆိုခဲ့။ သူတို့ရဲ့အစောပိုင်းကအလုပ်ကဒီအယူအဆထောက်ခံပါတယ်; centerfolds ဆွဲဆောင်မှုတွေ့သောသူတို့သညျ (ကသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူမေတ္တာ၌လျော့နည်းအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ ratedKenrick et al ။ , 2003) ။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ တူညီသောထိတွေ့မှုကသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုချစ်သောအမျိုးသမီးများ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုမထိခိုက်စေပါ။Kenrick et al ။ , 2003) ။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရတစ်ပတ်လျှင် ၁ နာရီ ၆ ပတ်ကြာအကြမ်းမဖက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ချစ်ခင်မှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်၊Zillmann & Bryant, 1988) ။ သူတို့ကအစစိတ်ခံစားမှုပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ပိုမိုအရေးပါမှုတင်လိုက်တယ်။ အခွားသောသုတေသနညစ်ညမ်းဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့အိမ်ထောင်ရေး၏တန်ဖိုးနှင့် Non-monogamous ဆက်ဆံရေး (မြင့်မားထောက်ခံချက်နှင့် ပတ်သက်. သံသယနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါညွှန်ပြZillmann, 1989) ။ သုတေသန၏ဤခန္ဓာကိုယ် SEM မှထိတွေ့မှုဖြစ်ကောင်းအထူးသဖြင့်လူတို့သညျအဘို့, အနုတ်လက္ခဏာကြားဆက်ဆံရေးအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ဖော်ပြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အခြားအလုပ်အမြိုးသမီးမြားသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကို SEM နှင့်အပျက်သဘောသဘောထားကြည့်ရှုအကြားလင့်များကိုရှာဖွေရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ Linz, Donnerstein နှင့် Penrod (1988) အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုလုပ်ခဲ့တယ်တွေ့ရှိခဲ့ မဟုတ် အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုများအပေါ်အမျိုးသားများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတိုးမြှင့်စေခြင်း အလားတူစွာ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုသိသိသာသာနိမ့်ကျစွာကြည့်ရှုခြင်းကပင်လျှင်အမျိုးသမီးများ၏အသိဥာဏ်စွမ်းရည်၊ လိင်စိတ်၊ ဆွဲဆောင်မှု၊Jansma, Linz, Mulac, & Imrich, 1997) ။ အတူတူယူပါကလူတခြို့ SEM ထိတွေ့ပြီးနောက်အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုအနုတ်လက္ခဏာထင်မြင်ယူဆအတွက်တိုးတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပေမယ့်, မ, လူအပေါင်းတို့ထိုကဲ့သို့သောအနုတ်လက္ခဏာနည်းလမ်းထိခိုက်ဖြစ်ကြောင်းပေါ်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်သရုပ်ပြပြီမျှလေ့လာမှုကိုသိသောမှတ်သားသင့်တယ် အပြုသဘောဆောင် ယေဘုယျအားဖြင့်ဆက်ဆံရေးလည်ပတ်မှုအတွက်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်များ၏အမျိုးသားများ၏အမြင်များအတွက် SEM တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။
အချို့သောသုတေသနများအရအမျိုးသမီးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သတ်သောယေဘူယျသဘောထားများကို SEM နှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးသားများ၏သဘောထားနှင့်အတူတကွလေ့လာခဲ့သည်။ O'Reilly et al ။ , 2007), အမျိုးသမီးများအပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်သော SEM သုတေသနအများစုသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ SEM ကြည့်ရှုခြင်းအပေါ်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Bergner နှင့် Bridges (2002) အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုကြည့်ခြင်းအားအလွန်အကျွံအဖြစ်ရှုမြင်သောအခါ၎င်းသည်ဆက်ဆံရေးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်လေ့ရှိသည်။ သူတို့မိတ်ဖက်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုအလွန်အမင်းထင်မြင်မိသောအမျိုးသမီးများထံမှအင်တာနက်စာဘုတ်များသို့ပို့စ် ၁၀၀ ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဤအမျိုးသမီးများသည်“ လိမ်လည်ခြင်း”၊ “ ကိစ္စ၊ ” နှင့်“ သစ္စာဖောက်ခြင်း” စသည့်စကားလုံးများကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို“ လိင်စွဲလမ်းသူများ”၊ “ sexx degenerates” နှင့်“ မတရားသောသူများ” ဟုရည်ညွှန်းသည်။ ရောဂါလက္ခဏာစွဲလိင်စွဲသူများ၏အမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ထိုသူများနှင့်အတူတူပင်ထင်မြင်ချက်များကိုခံယူလေ့ရှိသည် Bergner နှင့် Bridges '(၂၀၀၂) လေ့လာချက် (Schneider, 2000) ။ သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆအများဆုံးဖွယ်ရှိပိုပြီးအစွန်းရောက်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများထက်များမှာဒါသို့သော်ဤနှစ်ခုနမူနာ, အထီးမိတ်ဖက်ခြင်းဖြင့် SEM အလွန်မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်များ၏ SEM ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို၍ ကိုယ်စားပြုအမျိုးသမီးများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုအကဲဖြတ်ထားသည့်သုတေသနကယခင်လေ့လာမှုနှစ်ခုတွင်အမျိုးသမီးများကဲ့သို့သောအပျက်သဘောဆောင်သောထင်မြင်ချက်များကိုမခံယူတတ်ကြောင်းဖော်ပြသည် (တံတားများ et al ။ , 2003) ။ အမှန်စင်စစ်၊ အမျိုးသမီးများသည် ၄ ​​င်းတို့၏လက်တွဲဖော်များ၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင်သည့်ဖော်ပြချက်အချို့ကိုသဘောတူခဲ့ကြပြီး၊ ဥပမာ -“ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်စေသည်။ သုံးပုံတစ်ပုံသာသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အသုံးပြုမှုကိုအပျက်သဘောဆောင်သောဖောက်ပြန်မှုပုံစံအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ရှုမြင်ပုံကိုကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်အရမြင့်မားသောနှုန်းဖြင့်ဖော်ပြသောအမျိုးသမီးများသည်စိတ်ပျက်စရာအများဆုံးဖြစ်သည် (တံတားများ et al ။ , 2003) ။ ဤရလဒ်များအရမိန်းမများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏မိတ်ဖက် SEM ကြည့်ခြင်းကိုအလွန်အကျွံမရှုမြင်ပါကကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်ဟုရှုမြင်မည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာ၊ အချို့သောအမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်များ၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတိုးမြှင့်စေသည်ဟုပင်ရှုမြင်နိုင်သည်။
SEM ဆိုင်ရာစာပေနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများ၏အကန့်အသတ်များအနက်တစ်ခုမှာလေ့လာမှုအများစုသည်လက်တွေ့ဘ ၀ အတွေ့အကြုံများကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိသောစမ်းသပ်သည့်အခြေအနေတွင် SEM နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးများအပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထားအပေါ်အကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလေ့လာမှုသည် SEM တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး ချင်း၏ဘ ၀ တွင် (အတူတကွလေ့လာခြင်းနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်) ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ဤနယ်ပယ်ရှိကွာဟမှုကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။ အပြုအမူအားသဘာဝအရတွေ့ရှိမှုအရအကဲဖြတ်ခြင်းကစမ်းသပ်မှုပါရာဒိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်သောအပြုအမူနှင့်ဆန့်ကျင်။ ရလဒ်များကိုပြည်သူလူထု၏သဘာဝအပြုအမူနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကိုပိုမိုအနီးကပ်ထင်ဟပ်စေသည်။
အချို့ကယခင်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုရန်လေ့သော်လည်းယောက်ျားတစ်ဦးတည်း SEM ကြည့်ရှုရန်လေ့ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးလိင်-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရုပ်ရှင်၎င်းတို့၏လတ်တလောကြည့်ရှုမေးမြန်းသည့်အခါယောက်ျားတစ်ဦးတည်းကမြင်ကြဘဲလျက်သတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်သော်လည်းဥပမာအားဖြင့်, အမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်းထက်သူတို့ဖက်နှင့်အတူကမြင်ခဲ့ပြီးသောပြောဖို့ပိုပြီးခဲ့ကြသည် (Traeen et al ။ , 2006) ။ လေ့လာမှုတစ်ခုတည်းတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်နှစ်ဆပိုများသည်၊ သူတို့တစ်စုံတစ် ဦး သည်သူတို့ကြည့်ရှုခဲ့သည့်လိင်ဆိုင်ရာပြတ်သားသည့်မဂ္ဂဇင်းများကိုဝယ်ယူခဲ့သည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုသုတအရ SEM နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး (စမ်းသပ်မှုတစ်ခု၏ပြင်ပ) နှင့်ဆက်ဆံရေးသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုကြိုတင်သုတေသနပြုမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အချို့သောလေ့လာမှုများကအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ SEM ကိုအခြားသူများ၏မျက်မှောက်တွင်ကြည့်ရှုရန်တောင်းဆိုခြင်းအပေါ်မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကသုတေသနဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုတိုက်ရိုက်မဖြေကြားသော်လည်း၊ ဤသုတေသနသည် SEM ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမိတ်ဖက်နှင့်ကြည့်ရှုခြင်းသည်အရည်အသွေးအရည်အသွေးနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်နေသည်ကိုနားလည်ရန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။ စမ်းသပ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရအမျိုးသားများသည်အမျိုးသားသူစိမ်းများနှင့်ကြည့်သည့်အခါသူစိမ်းများနှင့်အတူညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုများကိုကြည့်သောအခါလိင်မှုနှိုးဆွမှုလျော့နည်းခြင်းနှင့် SEM ကိုခံစားမှုနည်းသည်။လိုပက်ဇ် & ဂျော့ခ်ျ, 1995) ။ ဤ "Locker အခန်းတစ်ခန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု" လို့ခေါ်လူတို့သညျအမြိုးသမီးမြားညစ်ညမ်းသဘောမတူထင်သောကွောငျ့ဖွစျပျေါစခွေငျးငှါ, ဒါသူတို့အမြိုးသမီးမြား၏ရှေ့တော်၌မိမိတို့၏ခံစားတားစီး (လိုပက်ဇ် & ဂျော့ခ်ျ, 1995) ။ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်ရောနှော-ကျားမအုပျစု (နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုများကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာထက်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအခြားလေ့လာမှုမှာအမျိုးသမီးတွေပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်လိင်စိတ်နိုးထအစီရင်ခံတင်ပြLawrence & Herold, 1988) ။ ဒီအလုပျ၏စာရေးဆရာများသည်ဤတွေ့ရှိချက်ဟာသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများ၏ 30% သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ရှေ့ပွေးနိမိတျအဖြစ် X-rated ဗီဒီယိုများအသုံးပြုသောကပြောပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။ ပေါင်းစပ်ခုနှစ်တွင်ဤတွေ့ရှိချက်တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြားယောက်ျား (နဲ့အတူ SEM ကြည့်ရှုကြိုက်တတ်တဲ့ဟန်သူကိုယောက်ျား, မတူပဲကြောင်းညွှန်ပြစေခြင်းငှါလိုပက်ဇ် & ဂျော့ခ်ျ, 1995), အမြိုးသမီးမြားတစျယောကျတညျးသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကကြည့်ရှုခြင်းထက်မိမိတို့၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါလက်တွေ့စာပေလည်းရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှု၏ဆွေးနွေးမှုမှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများက Clinician (ရငျးနှီးနှင့်အတူအခက်အခဲများရှိခြင်းကြသူစုံတွဲများအဘို့အ SEM ရဲ့ကြည့်ရှုညွှန်ကြားပေးသို့မဟုတ် supporting ၏ utility ကိုယုံကြည်Manning, 2006; Striar & Bartlik, 1999) ။ ထို့အပြင်တဦးတည်းလေ့လာမှု (ကုသသူတို့ရဲ့ client များသဖြင့် SEM ရဲ့မြင်ကွင်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ထက်ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ကြောင်းဆိုကြသည်မှ 2.6 ဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြရော်ဘင်ဆင်၊ Manthei, Scheltema, Rich, & Koznar, 1999) ။ ထို့ကြောင့်အချို့သောပညာရှင်များနည်းနည်းသုတေသနဒီအယူအဆကိုထောကျပံ့သို့မဟုတ်ချေပရန်အတွက်တည်ရှိသော်လည်း SEM ၏ကြည်ကြည်ကြည့်ရှု, တစ်ဦးကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်ကျန်းကျန်းမာမာနှင့်အထောကျအကူဖွစျစနေိုငျသောစိတ်ကူးထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
ယခုလေ့လာမှုသည် SEM ကိုတစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊ တစ် ဦး ၏ရင်ခုန်သံပါတနာနှင့်ဖြစ်စေအတူတကွကြည့်ခြင်းသည်အခြားဆက်ဆံရေးလက္ခဏာများနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုစာပေများချဲ့ထွင်ရန်ကြိုးစားသည်။ SEM တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ခြင်းကရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များ၏ထင်မြင်ချက်များကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရရှိနိုင်သောသုတေသနအပေါ် အခြေခံ၍ အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများအတွက် SEM ကိုလုံးဝမရှုမြင်သူများသည်ယေဘုယျဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းမှု၊ ကတိကဝတ်များအပါအ ၀ င်ညွှန်းကိန်းများစွာအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသောဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးကိုတင်ပြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် SEM ကိုကြည့်ရှုသူများထက်ဆက်သွယ်မှုအရည်အသွေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသာမကဖောက်ပြန်မှုနှုန်းနိမ့်ကျခြင်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင် SEM ကိုအတူတကွကြည့်ရှုခြင်းသည်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ SEM ကိုအတူတကွကြည့်ခြင်းအားမိတ်ဖက်များအကြားမျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားဟုယူဆနိုင်သောကြောင့်ဤအပြုသဘောဆောင်သောအသင်းအဖွဲ့ကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မျှဝေထားသောအကျိုးစီးပွားများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောအထောက်အထားရှိသည်။Kurdek & Schmitt, 1986) ။ ဒါဟာအစမိတ်ဖက်အတူတကွ SEM သုံးပြီးအတွက်စေ့စပ်ထားတဲ့အတွက်ဆက်ဆံရေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆွေးနွေးရန်နှင့်ပူးတွဲ SEM ကြည့်ရှုရန်အတူတကွဆုံးဖြတ်နိုင်စေဖို့လိုအပ်ယုံကြည်မှုနှင့်ရငျးနှီးမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားတဲ့ဆကျဆံရေးအရည်အသွေးကိုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားယူဆချက်တစ်ကိုယ်ရေဆက်ဆံရေးအတွက် 18-35 နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကြီးများ, ကျပန်းနမူနာကို အသုံးပြု. လက်ရှိလေ့လာမှုမှာလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ဒီတော့နည်းနည်းသုတေသနအတူတူသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးတည်း SEM ရှုမြင်သောသူတို့၏အမျိုးအသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုလေ့လာခဲ့သည်, ငါတို့ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေးနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနမေးခွန်းများကိုစမ်းသပ်မတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာအပေါ်အချို့သောအခြေခံဖော်ပြရန် data တွေကိုတင်ပြပေးတော်မူ၏။
သင်တန်းသားများကို (N= 1291) United States မှာလက်မထပ်ရသေးဆက်ဆံရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပိုကြီးတဲ့စီမံကိန်းတွင်အစိတ်အပိုင်းကိုယူပြီးတစ်ဦးချင်းစီရှိကြ၏။ လက်ရှိလေ့လာမှုများအတွက်နမူနာ 475 ယောက်ျား (36.79%) နှင့် 816 အမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်သည်။ သင်တန်းသားများကို (18 ထံမှ 34 နှစ်အသက်အရွယ်အတွက်အရွယ်ရှိM= 25.51 SD= 4.0), ပညာရေး၏ 14 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးပျမ်းမျှခဲ့ခြင်းနှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်နှစ်စဉ် $ 15,000 မှ $ 19,999 ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အားလုံးသင်တန်းသားများကို 31.99% ဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ cohabiting အတူလက်မထပ်ရသေးခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၌တည်၏။ လူမျိုးစု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဒီနမူနာ 8.4% ဟစ်စပန်းနစ်သို့မဟုတ်လက်တင်မဟုတ်% ဟစ်စပန်းနစ်သို့မဟုတ်လက်တင်နှင့် 91.6 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, နမူနာ 75.9% White က, 14.3% က Black သို့မဟုတ်အာဖရိကန်အမေရိကန်, 3.3% အာရှ, 1.1% အမေရိကန်အိန္ဒိယ / Alaska ဇာတိနှင့် .3% ဟာဝယေံ Native သို့မဟုတ်အခြားပစိဖိတ်ကျွန်းသားရှိ၏ 3.8% တစ်ဦးထက်ပိုအပြေးပြိုင်ပွဲ၏ဖြစ်ခြင်းအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် 1.3% ဟာအပြေးပြိုင်ပွဲသတင်းပို့ခဲ့ပါဘူး။
ပိုကြီးတဲ့စီမံကိနျးအတှကျသင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းဖို့, တစ်ဦးခေါ်ဆိုမှုစင်တာတဆက်တည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းအိမ်ထောင်စုခေါ်ဆိုရန်ပစ်မှတ်ထား-စာရင်းတယ်လီဖုန်းနမူနာနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအတိုချုပ်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်, တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်မှုများအတွက်ပြခဲ့ကြသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်, သင်တန်းသားများကို 18 နှင့် 34 အကြားဖြစ်နှင့်2လအတွင်းသို့မဟုတ်ရှည်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်အတူတစ်တစ်ကိုယ်ရေဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကပိုကြီးစီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်သည့်အတော်လေးတည်ငြိမ်ချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ဒေတာ, ရယူနိုင်အောင်ဆက်ဆံရေး၏အရှည်များအတွက်သတ်မှတ်ထားတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ , အရည်အချင်းပြည့်မီပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီနှင့်ပြည့်စုံမေးလ်လိပ်စာများ (ထောက်ပံ့သူများသည်N= 2,213) သူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုစိစစ်၏2ရက်သတ္တပတ်အတွင်းပုံစံများကိုပို့ခဲ့ကြသည်။ ပုံစံများကိုပို့ခဲ့ကြသည်သောသူတို့၏အမျိုးအ, 1,447 တစ်ဦးချင်းစီ (65.4% တုံ့ပြန်မှုနှုန်းမှာ) သူတို့ပြန်ရောက်; သို့သော်ဤစစ်တမ်းပါဝင်သူများ၏ 153 1294 တစ်နမူနာထွက်ခွာဖြစ်စေဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းကိုသူတို့ပါဝင်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမ၎င်းတို့၏ပုံစံများပေါ်ညွှန်ပြ။ ဤအရာသုံးခုတစ်ဦးချင်းစီအရှင်လက်ရှိလေ့လာမှုအဘို့နောက်ဆုံးနမူနာ 1291 ခဲ့ SEM နှင့် ပတ်သက်. ပစ္စည်းများကိုမဖြေခဲ့ပါဘူး။ ပိုကြီးတဲ့စီမံကိနျးအတှကျအဲဒီတစ်ဦးချင်းစီ longitudinal နောက်တော်သို့လိုက်ပေမယ့်လက်ရှိလေ့လာမှုသာဒေတာစုဆောင်းမှု၏ကနဦးလှိုင်းကနေဒေတာတွေကိုအလုပ်လုပ်နေကြသည်။
အခြေခံနောက်ခံဝိသေသလက္ခဏာများ (ဥပမာအသက်, ဝင်ငွေ) ဒေတာအဖြစ်ကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေနှင့်အရှည်ပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်, တစ်ဦးအသက်အပိုင်းအခြားမေးခွန်းလွှာအတွက်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ယာနျဘာသာတရားကိုပစ္စည်းနှင့်အတူပုံစံများကိုဤအပိုင်းကိုတိုင်းတာခဲ့ပါတယ်: "ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, ဘယ်လိုဘာသာရေးသင်သောသင်ပြောချင်ပါသလဲ" ဒီပစ္စည်းကို (က 1 အပေါ် rated ခဲ့သည်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး) (7 မှအလွန်ဘာသာရေး) စကေး။ ဒါဟာ convergence တရားဝင်မှု (သရုပ်ပြခဲ့သည့်အတွက်ယခင်သုတေသနများတွင်အသုံးပြုထားသည်Rhoades, Stanley, & Markman, 2009).
သင်နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကြည့်ပြီး "လုပ်ပါ," သင့်ကိုယ်သင်အားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားက်ဘ်ဆိုက်များ, မဂ္ဂဇင်းများ, ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပါသလား ": ကျနော်တို့သင်တန်းသားများကို SEM တစ်ဦးတည်းကြည့်ရှုခြင်းရှိမရှိသူတို့ဖက်နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုအားပေးဖြစ်စေမအကဲဖြတ်ရန်နှစ်ခုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခဲ့ မဂ္ဂဇင်းများ, ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်အတူတူ? "အဖြေရွေးချယ်မှုခဲ့ကြသည်" မဟုတ်ပါ "" ဟုတ်ပါတယ်, တစ်ခါတစ်ရံ, "နှင့်" ဟုတ်ကဲ့, မကြာခဏ။ "ဒီမှာတင်ဆက်သည့်စမ်းသပ်မှုများအတွက်" မဟုတ်ပါ "ပြန်ဖြေတဲ့သူတွေကို0အဖြစ် coded ခဲ့ကြသည်နှင့်သူတို့" ပြန်ဖြေတဲ့သူ ဟုတ်ပါတယ်, တခါတရံတွင် "သို့မဟုတ်" ဟုတ်ပါတယ်, မကြာခဏ "1 အဖြစ် coded ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့မဟုတ်ဘဲကြည့်ရှု၏ကြိမ်နှုန်းဆန်းစစ်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းထက်, ကြည့်ရှုရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့သောသူတို့အား SEM ကြည့်ရှုရာတွင်ပါဝင်နေတစ်ခါမျှတဲ့သူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအတွက်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားသောကြောင့်အဲဒီနှစျခု "Yes" ကိုအုပျစုပေါင်းစပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ "တစ်ခါတစ်ရံ" "မကြာခဏ" နှိုင်းယှဉ်မရှိအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ကြပြီးဒါဟာအတိုင်းအတာသဘောသဘာဝအတွက်ကြားကာလကြောင်းတည်ထောင်ရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့အပြင်, ဒီစကေးဖွယ်ရှိအကြိမ်ရေ၏ဆင်းရဲသားအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။
အနုတ်လက္ခဏာဆက်သွယ်ရေးတိုင်းတာရန်ကျနော်တို့ကို (ဆက်သွယ်ရေးအန္တရာယ်လက္ခဏာများစကေးကိုအသုံးပြုStanley & Markman, 1997) ။ ဒီ 7-ကို item စကေးတွင်ထိုကဲ့သို့သော "နည်းနည်းအငြင်းပွားမှုများနာမကိုအမှီ-ခေါ်ဆိုမှု, စွပ်စွဲချက်နှင့်အတူရုပ်ဆိုးတိုက်ပွဲတွေသို့ဝေဖန်မှုများတင်းမာမှုများလျော့ပါးစေရန်, ဒါမှမဟုတ်အတိတ်တက်ဆောင်ခဲ့နှိပ်စက်တာ" (တစ် 1 အပေါ်အဖြစ်၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအတွက်ဆက်သွယ်ရေးအကြောင်းကိုသင်တန်းသားများမှုနှုန်းပစ္စည်းများဘယ်တော့မှသို့မဟုတ်နီးပါးဘယ်တော့မှ) (3 မှမကြာခဏ) စကေး။ ဒါဟာစကေး (ယခင်အလုပ်အတွက်လုံလောက်သောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှုသရုပ်ပြထားပါတယ်Kline et al ။ , 2004) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင် Cronbach ၏ alpha (α) = ၈၁ ။
ကျနော်တို့ကို (Dyadic ညှိယူစကေး၏ 4-ကို item version ကိုအသုံးပြုခဲ့Sabourin, Valois, & Lussier, 2005; Spanier, 1976) ကြားဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းမှုတိုင်းတာရန်။ ဤသည်ကိုအတိုင်းအရှည်ပျော်ရွှင်မှုကို, ဖျက်သိမ်းအကြောင်းကိုအတှေး, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကိုးစားသနှင့်ဆက်ဆံရေးမယ့်ပုံကိုကောင်းစွာအကြောင်းကိုအထွေထွေကို item အကြောင်းကိုပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ဒီနမူနာခုနှစ်တွင်, (α) = ။ 81 ။
ထို့အပြင်လူ့ကတိကဝတ်ကိုခေါ်ပျနှံသည်, Revised ကတိသစ္စာ Inventory (ထံမှ 14-item ကိုအပျနှံစကေးကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်Stanley & Markman, 1992) ။ ဥပမာအားဖြင့်ပစ္စည်း "ကျွန်မဒီဆက်ဆံရေးဟာနေပါစေကျနော်တို့ကြုံတွေ့ရကြမ်းတမ်းသောအရာကိုကြိမ်ခိုင်မာတဲ့နေဖို့လိုခငျြ" နှင့် "ငါ '' ကျွန်တော်တို့ကို '' ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ငါ့ဖက်နှင့်ပိုပြီးငါ့ကိုစဉ်းစားလိုခြင်းနှင့် 'ငါတို့' '' ငါ့ကို '' ထက်နှင့် '' သူ့ကိုသူ / သူမ၏များမှာ ။ ' "တစ်ဦးချင်းစီကို item (က 1 အပေါ် rated ခဲ့သည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူ) (7 မှပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူ) စကေး။ လေ့လာမှုများစွာကဤတိုင်းတာမှု၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုကိုပြသခဲ့သည် Kline et al ။ , 2004; Stanley & Markman, 1992) ။ ဒီနမူနာခုနှစ်တွင်, (α) = ။ 88 ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဘို့, သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦး 1 အပေါ် ( "ကျနော်တို့ကစိတ်ကျေနပ်စရာအာရုံငါးပါးသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆကျဆံရေးရှိ" ratedပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူ) (7 မှပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူ) စကေး။ ဤအကြောင်းအရာသည် (ယခင်သုတေသနအတွက်တရားဝင်မှုသရုပ်ပြထားပါတယ်Rhoades et al ။ , 2009; Stanley, Amato, Johnson, & Markman, 2006).
ဖောက်ပြန်ဘို့, သင်တန်းသားများကိုမေးမွနျးခဲ့သညျ, "သင်အလေးအနက်ထားချိန်းတွေ့စတင်ကတည်းကသင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထက်အခြားသူတစ်ဦးဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသလား" ဤအကြောင်းအရာသည်ယခင်သုတေသနအပေါ်အခြေခံကဒီလေ့လာမှုအဘို့တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်တင်ပြအဆိုပါစမ်းသပ်မှုများအတွက်, "မဟုတ်ပါ" ပြန်ဖြေတဲ့သူတွေကို0အဖြစ် coded ခဲ့ကြသည်နှင့် "ဟုတ်ကဲ့, လူတစ်ဦးနှင့်အတူ" "တစ်ဦးထက်ပိုလူတစ်ဦးနှင့်အတူဟုတ်ကဲ့," သို့မဟုတ်ဖြေကြားသောသူတို့အား 1 အဖြစ် coded ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ဖောက်ပြန်မိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်သည်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမဟောကိန်းများကိုလုပ်သောကြောင့်ကျနော်တို့ကဤနှစ်ခုကို "Yes" ကိုတုန့်ပြန် options များပေါင်းစပ်။
ဒေတာကို Analytics မဟာဗျူဟာ
, (35.9% "မ SEM") သာ ( "တစ်ဦးတည်းသာ" သူတို့ကိုယ်သူတို့များက SEM ကြည့်ရှုပြီးမှ, ကျနော်တို့ SEM ကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှသောသူတို့အားအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ chi-စတုရန်းနှင့်ကှဲလှဲ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA) ကိုအသုံးပြု 19.3% ), သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်အတူ SEM ကြည့်ရှုအားပေး, ဒါပေမယ့်မရတစ်ဦးတည်း ( "အတူတူသာ"; 15.9%), နဲ့ ( "အတူတကွ / တစ်ဦးတည်း" နှစ်ဦးစလုံးအတူတကွနှင့်တစ်ဦးတည်း SEM ကြည့်ရှုပြီးမှ, 29.0%) ။ omnibus စမ်းသပ်မှုသိသာထင်ရှားသောအခါကျနော်တို့ပြီးတော့ကိုသုံး tအဆိုပါအုပ်စုများအကြားတိကျသောသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုဆနျးစစျဖို့ -tests ။ ကြီးမားသောနမူနာအရွယ်အစားပေးထားကျနော်တို့တစ်ရှေးရိုးစွဲ alpha မွေးစား pအဆိုပါ omnibus စမ်းသပ်မှုများအတွက် = .01 (ANOVA နှင့် chi-စတုရန်း) နှင့်များအတွက် Bonferroni ဆုံးမခြင်းကိုအသုံးပြု t-tests ။ အဲဒီမှာမဆို variable တွေကိုမသိသိသာသာ SEM အုပ်စုတစ်စုက X ကျားမအပြန်အလှန်ခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်, ဤရလဒ်များကိုအစီရင်ခံကြသည်မဟုတ်။ အားလုံးနည်းလမ်းများနှင့် SDs အစီရင်ခံကြသည် စားပွဲတင် 1။ Effect အရွယ်အစား (Cohen's) d) သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက်စာသားထဲမှာတင်ပြနေကြပါတယ်။
နည်းလမ်, SDs နှင့်လိင်-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာကြည့်ရှုအုပ်စုများတစ် function ကိုအဖြစ်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု
အမျိုးသမီးတွေထက်သိသိသာသာပိုပြီးယောက်ျား (76.8%) (31.6%) တစ်ဦးတည်း SEM, χကြည့်ရှုသတင်းပေးပို့2(1, N= 1291) = 245.92, p<.001, ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုအစီရင်ခံရှိမရှိ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ယောက်ျားမိန်းမတို့အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်မရှိ, p> .30 ဤနမူနာတွင် ၄၄.၈% သည် SEM ကိုသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
အသက်အရွယ်အဘို့အ SEM အုပ်စုတစ်စု၏အဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအဓိကသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်, p> .01 ။
တစ်ဦးက4(SEM အုပ်စုကို) ×2(ကျား, မ) ANOVA, ယာနျဘာသာတရားကို၏အဆငျ့အတှကျအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုညွှန်ပြ F(1, 1277) = 12.47, p<.001 ခြားနားချက်များ (t-tests) တစ်ဦးချင်းစီအတွက်မ SEM အုပ်စုတစ်စုကို (တစ်ဦးတည်းသာအုပ်စုတွင်များထက်စျယာနျဘာသာတရားကို၏အဆင့်မြင့်ခဲ့ကြောင်းပြသd= .38) နှင့်တစ်ဦးတည်း / အတူတူအုပ်စုသည် (d= .41) ။
တစ်ဦးက4(SEM အုပ်စုကို) ×2(ကျား, မ) ANOVA, ကျား, မများအတွက်အဓိကသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည် F(1, 1283) = 10.28, p<.01, အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်အမျိုးသားများကြားတွင်အချိန်ကာလကြာရှည်စွာဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ANOVA သည် SEM အုပ်စုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါ။ p> .01 ။
တစ်ဦးကနှစ်ခု-by-နှစ်ခု chi-စတုရန်း, cohabiting သူတစ်ဦးချင်းစီ (52.5%) ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီထက် (41.2%) သူတို့အတူတကွ SEM ကြည့်ရှုအားပေးကြောင်းသတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိကြောင်းကိုညွှန်ပြ χ2(1, N= 1291) = 14.53, p<.001 SEM တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်မရှိပါ။
ဆက်သွယ်ရေးအပေါ်လေးပါး SEM အုပ်စုများအကြားခြားနားချက်များအကဲဖြတ်ရန်တစ်4(SEM အုပ်စုကို) ×2(ကျား, မ) ANOVA ကောက်ယူခဲ့ပါတယ် (ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 1) ။ SEM အုပ်စုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်, F(1, 1280) = 9.25, p<.001 SEM no-group တွင်ရှိသောသူများသည်တစ် ဦး တည်းသောအုပ်စုမှအဆိုးမြင်ဆက်သွယ်မှုကိုသိသိသာသာနိမ့်ကျကြောင်းတင်ပြခဲ့သည် (d= .26) နှင့်တစ်ဦးတည်း / အတူတူအုပ်စုသူများ (d= .26) ။
တစ်ဦးက4(SEM အုပ်စုကို) ×2(ကျား, မ) ANOVA, SEM အုပ်စုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုညွှန်ပြ F(1, 1147) = 3.95, p<.01 ။ no-SEM အုပ်စုရှိတစ် ဦး ချင်းစီသည်တစ် ဦး တည်းသီးသန့်အုပ်စုမှလူတစ် ဦး ချင်းထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းမှုရှိခဲ့သည် (d= .22) ။
တစ်ဦးက4(SEM အုပ်စုကို) ×2(ကျား, မ) ANOVA, SEM အုပ်စုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုညွှန်ပြ F(1, 1280) = 6.55, p<.001 S-no-SEM အဖွဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်များသည်တစ် ဦး တည်းသောအုပ်စုအတွင်းရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောအပ်နှံမှုနှုန်းကိုတင်ပြခဲ့သည် (d= .30) နှင့်တစ်ဦးတည်း / အတူတူအုပ်စုသည် (d= .22) ။ အဆိုပါအတူတူသာအုပ်စုတွင်တစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း (ထိုတစ်ဦးတည်းသာအုပ်စုတွင်များထက်အပ်နှံသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံတင်ပြd= .31) နှင့်တစ်ဦးတည်း / အတူတူအုပ်စုသည် (d= .23) ။
တစ်ဦးက4(SEM အုပ်စုကို) ×2(ကျား, မ) ANOVA, SEM အုပ်စုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုညွှန်ပြ F(1, 1275) = 8.39, p<.001 တစ် ဦး တည်းသောအုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်သူများသည် SEM မဟုတ်သူများထက်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုသိသိသာသာနိမ့်ကျကြောင်းတင်ပြခဲ့သည် (d= ။ 21), အအတူတကွသာ (d= .43), နှင့်တစ်ဦးတည်း / အတူတူအုပ်စုများ (d= .33) ။
ကျနော်တို့ SEM အုပ်စုတစ်စုနှင့် Self-အစီရင်ခံဖောက်ပြန် (yes သို့မဟုတ် no) အကြားဆက်ဆံရေးကိုအကဲဖြတ်ရန်လေး-by-နှစ်ခု chi-စတုရန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ chi-စတုရန်း, သိသာခဲ့သည် χ2(3, N= 1286) = 40.41, p<.001 အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီး ၉.၇% (nno-SEM အုပ်စုကိုသူတို့အလေးအနက်ထားချိန်းတွေ့စတင်ကတည်းကစဉ် 45% (၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ထက်အခြားသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရှိခြင်းအစီရင်ခံအတွက်သူတို့၏အမျိုးအ = 19.4)nအဆိုပါတစ်ဦးတည်းသာအုပ်စုတွင်သူတို့၏အမျိုးအ = 48), 18.2% (nအဆိုပါအတူတူသာအုပ်စုတွင်သူများနှင့် 37% ၏ = 26.5) (nအဆိုပါအတူတကွ / တစ်ဦးတည်းအုပ်စုသည်ဖောက်ပြန်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အတွက်သူတို့၏အမျိုးအ = 99) Follow-up, စမ်းသပ်မှုများ no-SEM အုပ်စုတွင်တစ်ဦးချင်းစီသည်အခြားအုပ်စုသုံးစုထက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးသိသိသာသာလျော့နည်းဖောက်ပြန်အစီရင်ခံပါတယ်။ ညွှန်ပြ
SEM နှင့်ဆက်ဆံရေးကြည့်ရှုအပေါ်လွန်ခဲ့သည့်သုတေသနအများကြီးဥပမာ (စမ်းသပ်ချက်များနှင့်ကျပန်းတာဝနျကိုသုံးပြီးဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာကောက်ယူခဲ့ပြီး, Glascock, 2005;Jansma et al ။ , 1997; Kenrick et al ။ , 2003) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လက်ရှိလေ့လာမှုကတစ် ဦး ချင်းစီအား SEM နှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီး SEM ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမိတ်ဖက်နှင့်ကြည့်ခြင်း (သို့) မိမိကိုယ်တိုင်ကြည့်ခြင်းသည်ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး၏အဓိကရှုထောင့်နှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင် SEM ကိုကြည့်ခြင်းသည်ဆက်နွယ်မှုလည်ပတ်မှုနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုဆွေးနွေးခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့၏ပိုမိုဖော်ပြရန်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှတွေ့ရှိချက်များကိုဆွေးနွေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ပြရန်ရလဒ်များကို, ဥပမာ (အယေဘုယျအားဖြင့်လက်ခံထားသောမိန်းမတို့သည်ထက် ပို. လူတို့သညျမိမိတို့ကိုယ်ကိုအားဖြင့် SEM ရှုမြင်ကြောင်းရှာဖွေတာထောက်ခံ Boies, 2002; ကာရိုး et al ။ , 2008) ။ သို့သျောကြှနျုပျတို့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုရန်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်သိသာထင်ရှားသောကျား, မကွဲပြားမှုကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဝက်နီးပါးသူတို့ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဆက်ဆံရေး၏အရှည်တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းနှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပေမယ့် cohabiting ခဲ့ကြသည်သောသူတို့အားချိန်းတွေ့ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုထက်ဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်အတူတကွနေထိုင်နေကြမဟုတ်ရှိမရှိမသက်ဆိုင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီအမူအကျင့်မရှိသလောက်စုံတွဲများနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်သုတေသနအတွက်ဖြေရှင်းပေမဲ့အဲဒီဖော်ပြရန်တွေ့ရှိချက်အတူတကွ SEM ကြည့်ရှုငယ်ရွယ်လက်မထပ်ရသေးစုံတွဲများကြားတွင်တစ်ဘုံလှုပ်ရှားမှုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
SEM ကြည့်ရှုပုံစံများလည်းစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။ မတိုင်မီကအလုပ် (အင်တာနက် SEM ကြည့်ရှုအားနည်းဘာသာရေးဆက်ဆံမှုမှဆက်စပ်ခဲ့ကြောင်းပြသstack et al ။ , 2004), နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအတွက်ရှာတွေ့မှာ SEM မကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီကိုယ်တိုင်သာဖြင့်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်သူတို့၏အဖော်နှင့်အတူနေဖြင့် SEM ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုထက်ပိုမိုဘာသာရေးခဲ့ကြသည်ကြောင်းကိုထောက်ခံပါတယ်။
ကြည့်ရှု SEM နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာလုပ်ငန်းဆောင်တာ, အားလုံးမှာ SEM မကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးတည်း SEM ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုအများအားဖြင့်ထောက်ခံခဲ့သည်ထက် functioning ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဆကျဆံရေးသတင်းပို့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆနှင့်စပ်လျဉ်း။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအားလုံးမှာ SEM မကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းနှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံး SEM ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီထက်နိမ့်အနုတ်လက္ခဏာဆက်သွယ်ရေးနှင့်အဆင့်မြင့်အပျနှံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အားလုံးမှာ SEM မကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီမှသာတစ်ဦးတည်း SEM ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးညှိနှိုင်းမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အားလုံးမှာ SEM ရှုမြင်မပြုခဲ့သောသူတို့အားမှာအနည်းဆုံးတစ်ဝက်သောကအခြားအုပ်စုသုံးစု၏ခဲ့သည့်ဖောက်ပြန်မှုနှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုကွဲပြားမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်တဲ့ခဲ့ကြသည်။
သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူ SEM ကြည့်ရှုသူတစ် ဦး ချင်းစီ SEM တစ် ဦး တည်းကြည့်ရှုသူထက်ပိုမိုမြင့်မားသောဆက်ဆံရေးမျိုးလည်ပတ်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့အယူအဆတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ခံခဲ့သည်။ SEM ကိုအတူတကွကြည့်ရှုသူများသည် SEM ကိုတစ် ဦး တည်းဖြစ်စေ၊ တစ် ဦး တည်းဖြစ်စေအတူတူကြည့်ရှုသူများထက် ပိုမို၍ ဆက်ကပ်အပ်နှံကြောင်းတင်ပြကြသည်။ SEM ကိုအတူတကွကြည့်ခြင်းသည် SEM ကိုသာကြည့်ခြင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သည် SEM ကိုတစ် ဦး တည်းကြည့်ရှုခဲ့သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှိုင်းယှဉ်မှုများမှာကဲ့သို့ပင်ကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားမှာပုံမှန်အားဖြင့်သေးငယ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် SEM ကိုတစ် ဦး နှင့်တွဲဖက်ခြင်းအားကြည့်ခြင်းအားမည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို SEM ကိုကြည့်ခြင်းထက်နိမ့်သောဆက်နွယ်မှုလည်ပတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဥပမာတစ်ခုသာရှိသည်။ SEM ကိုအတူတကွကြည့်ရှုသူများသည် SEM ကိုလုံးဝမကြည့်ရှုသူများထက်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ဖောက်ပြန်မှုပိုရှိသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်၊ ဤအုပ်စုနှစ်ခုအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ ဤရလဒ်သည် SEM ကိုအတူတကွကြည့်ရှုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖော်ပြနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အချို့သောဆက်ဆံရေးတွင်အရည်အသွေးနိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိခိုက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုလည်းမဖော်ပြပါ။
Manning (2006) SEM ကိုအတူတကွကြည့်ရှုခြင်းကတစ် ဦး တည်းကြည့်ရှုခြင်းသည်မိတ်ဖက်များအကြားနံရံတစ်ခုထူထောင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရ SEM ကိုကြည့်ရှုသောစုံတွဲများပိုမိုနီးကပ်စွာရှိခြင်းသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမှုသည် SEM ကိုကြည့်ရှုရန်လှုံ့ဆော်မှုရှိ၊ မရှိကိုတိုက်ရိုက်မပြောနိုင်သော်လည်း SEM ကိုသာကြည့်ရှုသူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုအနိမ့်ဆုံးသာရှိသည်ဟု Manning ၏ယူဆချက်ကထောက်ခံသည်။ စုံတွဲ၏လိင်ဆက်ဆံမှု။ သို့သော်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်မပျော်သောသူများသည် SEM ကိုလိင်ဆိုင်ရာစွမ်းအင်အတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအဖြစ်ရှာဖွေကြသည်။ ဤအဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအနက်နှင့်အတူအခက်အခဲသူတို့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ SEM တစ်ခုတည်းကိုဖြစ်စေ၊ အတူတကွကြည့်ခြင်းဖြစ်စေ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်လေ့လာချက်များအရသိသာသောကျား၊ မကွဲပြားမှုများမတွေ့ရပါ။ ၎င်းသည် SEM ကိုကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်ကြည့်ရှုခြင်းသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အလားတူနည်းလမ်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ ယခင်သုတေသနအများစုသည်အမျိုးသားများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အမြင်များ (ဥပမာ၊ တံတားများ et al ။ , 2003; Philaretou, Mahfouz, & Allen, 2005) ။ ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအားဖြင့် SEM ကြည့်ရှုအားပေးသောမိန်းမတို့သည်လည်းနိမ့်အရည်အသွေးကိုဆက်ဆံရေးရှိသည်ဖို့တော်မှာကြောင်းသရုပ်ပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသုတေသနကြောင်းစာပေကိုတိုးချဲ့။ အနာဂတ်သုတေသနနှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်မှအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းထားတဲ့အတွက်စုံတွဲများတစ်နမူနာပိုမိုနက်ရှိုင်းတွင်ဤယန္တရားဆနျးစစျနိုငျတယျ။ ဥပမာ, တစ်ဦးတည်း SEM ရှုမြင်သောမိန်းမတို့ကိုတစ်ဦးတည်းနှင့်စုံတွဲများအတွင်းတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အတူတကွ SEM ကြည့်ရှုအတွက်နှုန်းထားများသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကွဲပြားခြားနားသောဆက်ဆံရေးမျိုးဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်လျှင် SEM ရှုမြင်သူကိုမိတ်ဖက်လည်းရှိသည်ဖို့လေ့ရှိမရှိ။ သိရန်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်
ကျနော်တို့တင်ပြထားသောသုတေသနအချို့ကိုလက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအချို့ Clinician တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ရငျးနှီး (အဖြစ်အတူတကွ SEM ကြည့်ရှုညွှန်ကြားပေးထောက်ခံခဲ့ကြStriar & Bartlik, 1999) ။ အားလုံးမှာ SEM မကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီဖယ်ထုတ်ပြီး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုပိုမိုမြင့်မားအနုမောဒနာပြုပြီးအတူတကွ SEM ကြည့်ရှုသူနဲ့ဆက်စပ်တစ်ခုတည်းသောအပြုသဘောဆက်ဆံရေးဟာဝိသေသခဲ့ပေမယ့်ဒီတွေ့ရှိချက်ဆက်စပ်မှုခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။ ထိုကဲ့သို့သောဆေးညွှန်းမျက်ခြေမပြတ်ရှိမရှိရဲ့အကောင်းဆုံးစမ်းသပ်ကုထုံးအချို့စုံတွဲများ SEM နှင့်အခြားသူများမဟုတ်ကြည့်ရှုရန်တာဝန်ပေးထားတဲ့အတွက် randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် ပို. သုတေသနထိရောက်သောဖြစ်တို့အားဤသို့သောကြားဝင်များအတွက်ဆက်ဆံရေးအတွင်းတည်ရှိနေရန်လိုအပ်လိမ့်မယ်ထားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဒါဟာသုတေသနကိုလည်းတစ်ဦးတည်း SEM ကြည့်ရှုအနုတ်လက္ခဏာဆက်ဆံရေးဟာဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်အန္တရာယ်အချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါညွှန်ပြ။ ကျနော်တို့ဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်အပြန်အလှန် SEM တစ်ဦးတည်းဆောင်ကြည့်ရှုခြင်းရှိမရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုကနေမသိနိုငျသျောလညျးဤဒေတာကိုတစ်ဦးတည်း SEM ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ကသူတို့စိတ်ကူးယဉ်ဆက်ဆံရေးမှပြောပြတယ်အကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ clients များနှင့်အတူစကားပြောသူကို Clinician ဖို့အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်အားသာချက်များရှိသော်လည်းလေ့လာမှု၏အကန့်အသတ်နှင့်သာဆက်စပ်သင့်သည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် SEM ကိုတစ် ဦး တည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်းကြိမ်နှုန်းကိုအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အနာဂတ်သုတေသနသည် SEM (တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း) ၏ရှုထောင့်ကိုသာမကအခြားကွဲပြားသောကြည့်ရှုသည့်အပြုအမူ၏ကြိမ်နှုန်း၊ ကြည့်ရှုသည့်မီဒီယာအမျိုးအစား (ဥပမာ၊ အင်တာနက်၊ ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်း) တို့ဖြင့်ဤလေ့လာမှုတွင်တိုင်းတာထားသောအရာကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။ SEM အမျိုးအစား (ဥပမာ - ပျော့ပျောင်းသောသို့မဟုတ်အမာခံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဟုခေါ်သည့်အရာ) ။
ဤလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သောယင်းအစီအမံအများစုယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တရားဝင်ခဲ့ကြသည်ပေမယ်ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းကိုတိုင်းတာသည်၎င်း၏ sensitivity ကိုကန့်သတ်ထားကြပေမည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေးသည်ဤရှုထောငျ့ SEM နှင့်အတူအတွေ့အကြုံများကိုဆက်စပ်ပုံကိုအကြောင်းပိုမိုပျော့နှင့်စေ့စေ့စပ်စပ်ရှုထောင့်ပေးလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို longitudinal သုတေသနအပေါ်အခြေမခံသောကြောင့်ထို့အပြင်သူတို့သာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးမဘတ်နိုင်ပါသည်။
အနာဂတ်သုတေသနနှင့် ပတ်သက်၍ ဤစုံတွဲသည်လက်တွဲဖော်နှစ် ဦး စလုံးအားလေ့လာခြင်းမှအကျိုးရရှိနိုင်သည်။ မိတ်ဖက်များအနေဖြင့် SEM တစ်ခုတည်းနှင့်အတူတကွကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော၎င်းတို့၏ ဦး စားပေးမှုနှင့်အပြုအမူများအရလိုက်ဖက်မှုရှိ / မရှိနှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးသည်ဆိုပါကဥပမာစိတ်ဝင်စားရန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ မိတ်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးထံမှကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များသည်ဤနယ်ပယ်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး SEM တစ်ခုအားမိတ်ဖက်တစ် ဦး ၏ပုဂ္ဂလိကကြည့်ရှုခြင်းကအခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ဆက်နွယ်မှုအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသိရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အနာဂတ်သုတေသနတွင်လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်ယခင်လိင်ဆက်ဆံဖက်များ၏အရေအတွက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏လိင်မှုသမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့် SEM ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည်ကိုစဉ်းစားသင့်သည်။ SEM- ကြည့်ရှုခြင်းအပြုအမူနှင့်အတူလိင်ဆိုင်ရာသမိုင်းကိုလေ့လာခြင်းသည် SEM ကိုတစ် ဦး တည်းကြည့်ရှုခြင်းသည်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုရှင်းပြရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့သောသုတေသနမျိုးသည် SEM ကိုကြည့်ခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာ drive ကဲ့သို့သော ပို၍ အရေးကြီးသောတစ် ဦး ချင်းဝိသေသလက္ခဏာများအတွက် proxy ဟုတ်မဟုတ်ကိုခွဲထုတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဒီလေ့လာမှုအများအပြားလက်မထပ်ရသေးငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်သူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်နှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဖြစ်စေ, သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဝအသက်တာ၌ SEM ကြည့်ရှုရန်ရှေးခယျြကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒီအမူအကျင့်ကိုရှင်းလင်းစွာအများအပြားချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သေးပါကမကြာခဏတိုင်းတာသို့မဟုတ်ဆှေးနှေးခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေးအများအပြားကွဲပြားခြားနားသော domains များဖြစ်စေတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အတူတကွအဓိပ္ပါယ်ရှိသောနည်းလမ်းနှင့်အနာဂတ်သုတေသန SEM ကြည့်ရှုကြားဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အရည်အသွေးကိုသာသက်ရောက်ပုံကိုစူးစမ်းလေ့လာဆက်လက်သင့်ကြောင်း SEM ကြည့်ရှုရန်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒါဟာသုတေသနဖြစ်သူ Scott Stanley နှင့်ဒုတိယနှင့်တတိယစာရေးဆရာများမှချီးမြှင့်ကလေးကျန်းမာရေးနှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအမျိုးသားသိပ္ပံ (R01 HD0 47564) မှတစ်ဦးထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံခဲ့သည်။
Bergner RM, Bridges AJ ။ သုတေသနနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု: ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များအတွက်မိုးသည်းထန်စွာညစ်ညမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အရေးပါမှုကို။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်။ 2002; 28: 193-206 ။ [PubMed]
Boies SC တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှု - အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ချိတ်ဆက်မှု။ လူ့လိင်၏ကနေဒါဂျာနယ်။ 2002; 11: 77-89 ။
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအတွက် Bridges AJ၊ Bergner RM, Hesson-McInnis M. Romantic မိတ်ဖက်များ - အမျိုးသမီးများအတွက်ယင်း၏အရေးပါမှု။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်။ 2003; 29: 1-14 ။ [PubMed]
ကာရိုး JS, Padilla-Walker က LM, နယ်လ်ဆင် LJ, Olson CD ကို, Barry CM, Madsen SD က။ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို XXX: ထွန်းသစ်စလူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလက်ခံမှုနှင့်အသုံးပြုခြင်း။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်။ 2008; 23: 6-30 ။
ဂလပ်စ်ကိုဂျေအကြောင်းအရာနှင့်ဇာတ်ကောင်လိင်အဆင့်အတန်းနိမ့်ခြင်း - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုများ။ ဆက်သွယ်ရေးအစီရင်ခံစာများ။ 2005; 18: 43-53 ။
Haavio-Mannila အီး, ဘောလ်တစ်ပင်လယ်ဧရိယာ၌ Kontula O. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်း။ ပြည်သူ့အင်အားသုတေသနအင်စတီကျု, Helinski: 2003 ။
Jansma LL, Linz DG, Mulac A, Imrich DJ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ပြီးနောက်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှု - ပျက်စီးခြင်းသည်ထူးခြားစေသလား။ ဆက်သွယ်ရေး Monographs ။ 1997; 64: 1-24 ။
Kenrick ၎င်းကို, Gutierres SE, Goldberg ll ။ လူကြိုက်များ erotica နှင့်သူစိမ်းများနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏တရားစီရင်ပိုင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ခုနှစ်တွင်: Plous S က, အယ်ဒီတာ။ စိတ်စွန်းကွက်နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုနားလည်ခြင်း။ McGraw-Hill က; နယူးယောက်: 2003 ။ စစ။ 243-248 ။
Kline GH, Stanley သည် SM, Markman HJ, Olmos-Gallo ပြောတာကတော့ PA ဆိုပြီး, ပီတာက M, Whitton SW, et al ။ Preengagement တွဲပြီးနှင့်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်ရေးရလဒ်များအဘို့တိုးမြှင့်အန္တရာယ်: အချိန်ကိုက်အရာအားလုံးသည်။ မိသားစုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2004; 18: 311-318 ။ [PubMed]
Kurdek LA က, Schmitt JP ။ ဆက်ဆံရေးဟာလိင်ကွဲလက်ထပ်, လိင်ကွဲတွဲပြီးအတွက်အရည်အသွေး, လိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်တူချစ်သူစုံတွဲများ၏အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 1986; 22: 305-309 ။
Lawrence KA, Herold ES ။ အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်သဘောထားနှင့်တွေ့ကြုံမှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 1988; 24: 161-169 ။ [PubMed]
Linz DG, Donnerstein အီး, အမျိုးသမီးများ၏အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်လိင်လျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုမှရေရှည်ထိတွေ့မှု၏ Penrod အက်စ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1988; 55: 758-768 ။ [PubMed]
လိုပက်ဇ် PA ဆိုပြီး, ဂျော့ခ်ျ WH ။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော erotica ၏အမျိုးသားများ၏ပျော်ရွှင်မှု - လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏သဘောထားများနှင့်ကျား၊ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 1995; 32: 275-288 ။
Manning JC ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏အိမ်ထောင်နှင့်မိသားစုအပေါ်သက်ရောက်မှု - သုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 2006; 13: 131-165 ။
ကျားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ: Mosher DL, MacIan P. ကောလိပ်ယောက်ျားမိန်းမတို့အထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးပရိတ်သတ်များအတွက်ရည်ရွယ် X-rated ဗီဒီယိုများတုံ့ပြန်ကြသည်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 1994; 31: 99-113 ။
O'Reilly S, Knox: D, Zusman ME ။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအပေါ်ကောလိပ်ကျောင်းသား၏သဘောထား။ ကောလိပ်ကျောင်းသားဂျာနယ်။ 2007; 41: 402-406 ။
Philaretou AG၊ Mahfouz AY, Allen KR ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်အမျိုးသားများ၏သုခချမ်းသာကိုအသုံးပြုခြင်း။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးနိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 2005; 4: 149-169 ။
Rhoades GK, Stanley သည် SM, Markman HJ ။ pre-ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွဲပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှု: ယခင်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုပွားနဲ့ extension ။ မိသားစုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2009; 23: 107-111 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် BE, Manthei R ကို, Scheltema K သည်, ချမ်းသာ R ကို, Koznar ဂျေကုထုံးအမေရိကန်နှင့်ခကျြမြားနှငျ့စလိုဗကျမ္မတနိုင်ငံတွေရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည်: တစ်ဦးကအရည်အသွေးလေ့လာမှု။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်။ 1999; 25: 103-119 ။ [PubMed]
Sabourin SP, Valois P ကို, Lussier Y. ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တစ်ဦး nonparametric ကို item ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမော်ဒယ်နှင့်အတူ Dyadic ညှိယူစကေး၏အကျဉ်းဗားရှင်း validation ကို။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်။ 2005; 17: 15-17 ။ [PubMed]
Schneider JP ။ cybersex သင်တန်းသားများကိုတစ် ဦး ကအရည်အသွေးလေ့လာမှု: ကျားကွဲပြားခြားနားမှု, ပြန်လည်နာလန်ထူပြ,နာများနှင့်ကုထုံးများအတွက်သက်ရောက်မှု။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 2000; 7: 249-278 ။
Spanier GB အထိ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်ဆင်တူ dyads ၏အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ဘို့က New အကြေးခွံ: dyadic ညှိနှိုင်းမှုတိုင်းတာခြင်း။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုများ၏ဂျာနယ်။ 1976; 38: 15-28 ။
stack က S, Wasserman ငါ Kerns R. အရွယ်ရောက်လူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုခြင်း။ လူမှုရေးသိပ္ပံလပတ်။ 2004; 85: 75-88 ။
စတန်လေသည် SM, Amato PR စနစ်, ဂျွန်ဆင်, CA, Markman HJ ။ အိမ်မထောင်မီပညာရေး, အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေး, နှင့်အိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်မှု: ကြီးမားတဲ့ Random, အိမ်ထောင်စုစစ်တမ်းကနေတွေ့ရှိချက်။ မိသားစုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2006; 20: 117-126 ။ [PubMed]
စတန်လေသည် SM, Markman HJ ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးအတွက်ကတိကဝတ်များကိုသုံးသပ်ခြင်း။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုများ၏ဂျာနယ်။ 1992; 54: 595-608 ။
စတန်လေသည် SM, Markman HJ ။ အဆိုပါ 90s အတွက်အိမ်ထောင်ရေး: တစ်ဦးကတစ်နိုင်ငံလုံးကျပန်းဖုန်းကိုစစ်တမ်းကောက်။ prep; Denver, CO: 1997 ။
စတော့အိတ် WE ။ ယောက်ျားနှင့်လိင်စက်မှုလုပ်ငန်း: ကုန်စည်အဖြစ်လိင်။ ခုနှစ်တွင်: Levant RF, Brooks ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, အယ်ဒီတာများ။ ယောက်ျားနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှု: နယူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်။ ယောဟနျသ Wiley; Hoboken, NJ: 1997 ။ စစ။ 100-132 ။
Striar S ကိုလိင်စိတ်၏ Bartlik ခစိတ်ကြွဆေး: လိင်ကုထုံးအတွက် erotica များအသုံးပြုမှု။ စိတ်ရောဂါရာဇဝင်။ 1999; 29: 60-62 ။
Træen B, Nilsen TS, ရိုးရာမီဒီယာနှင့်နော်ဝေအတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်း၏ Stigum အိပ်ချ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 2006; 43: 245-254 ။ [PubMed]
Zillmann ဃညစ်ညမ်း၏အချိန်ကြာမြင့်စွာစားသုံးမှု၏ဆိုးကျိုးများ။ ခုနှစ်တွင်: Zillmann: D, Bryant J ကို, အယ်ဒီတာများ။ ညစ်ညမ်း: သုတေသနတိုးတက်လာနှင့်မူဝါဒထည့်သွင်းစဉ်းစား။ လောရင့် Erlbaum; Hillsdale, NJ: 1989 ။ စစ။ 127-157 ။
Zillmann: D, လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ် Bryant ဂျေညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ၏သက်ရောက်မှု။ အသုံးချလူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1988; 18: 438-453 ။